Bayoloji - Wikipedia
Cilmiga Nooloha, Bayoloji (Reer aw xasan waa beel kamid ah‎; Af-Taliyaani : biologia; Af Ingiriis : biology;) Bayooloji waa eray ka kooban laba eray oo giriig ah oo kalla ah <<Bios>> oo ah nolol iyo <<Logas>> oo ah barashada ama cilmiga. Haddaba bayoolojigu waa barashada waxa nool. Muxuu ka samaysan yahay waxa nooli? Sidee buu u habaysan yahay? Barashada waxa nool waxaa sal u ah barshada unugga. Unuggu waa waxa ugu yar wax nool ee uu ka samaysan yahay jirka nooluhu; ha ahaado mid dhir ama mid xayawaan. Aqoonyahannada bayoolojigu waxay waqti dheer ku lumiyeen barashda dhirta iyo xayawaanka; sida ay u noolyihiin, sida uu jirkoodu u shaqeeyo iyo sida midba midka kale noloshiisa u saameeyo.
Qarniyaddi hore, aqoonta cilmiga bayoolojigu sida saynisyada kaleba heer wanaagsan lagama gaarin, sababtuna waxay ahayd iyada oo aan teknoolojigu heer fiican marayn. Qarnigii u dambeeyay aqoontiisu way sii korodhay waana sii ballaaratay, taasna waxaa u suurto geliyay heerka wanaagsan ee uu gaaray teknolojigu.
Qeybaha Noolaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Guud ahaan Noolaha waxaa loo qeybiya shan qeybood oo waa weey kuwaasoo kala ah.
Bayoloji[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Bayolojiga waxaa soo saaray niman giriig u dhsahay oo sahamiyey wal xo kla dugan ku waas ku guulaystay shamintii ay wadeen Bayolojigu waa cilmiga barashada noolaha iyo ma noolaha ; noolahaasi siduu doonoba ha u jiro ama ha u ekaadee. Barashada habka uu nooluhu u shaqeeyo. Qofka baranaya cilmiga bayolojigu waa qof raba inuu wax ka ogaado sida ay waxa nooli u shaqeeyaan iyo waxa ay ka dhisan yihiin. iyo sida waxaa aan noolayn lo is ticmaalo sida wal xo badan o aduunka dulyaal sida dhagaxa Nooluhu muxuu ka samaysan yahay. Nooluhu wuxuu ka samaysan yahay unugyo. Unugu waa waxa ugu yar ee waxa nooli uu ka dhisan yahay. Unuggu wuu qaybsamaa si uu u bato ama u tarmo. Unugga waxaa ku jira unugyo yar yar oo u ogolada inu unugu kobco ama u koro una ogolada inu unugu siijiro lana dhaxlo . Waxyaalaha ay nooluhu iska dhaxlaan wexey ku jiraan unugga bu´diisa.
Noloshu xaggee bey ka timid Nooluhu ma aha wax ku yimid tadawur. Rabbi ayaa abuuray/khalqay. Nooluha dhammaantiis waxaa abuuray Alle wax walba kara. Nooluhu ma aha wax iska yimid oon la garanaynin meesha uu ka yimid. Dadku wexey ka yimaadeen Aadam, nebi Aadan. Aadanna waxaa laga sameeyey ciid. Dhirta Allaa khalqay ee iskama iman. Noolaha dhammaantiis ujeeddo ayaa Alle u khalqay. Ujeedadaasina waa iney ogaadaan inuu Alle wax abuuraa uu jiro. Isagaasna ay caabudaan. Unugga Allaa khalqay, amar Allena waa ku shaqeeyaa. Baayoolojigu waa cilmiga barashada noolahaBilogy
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayoloji&oldid=235703"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 May 2022, marka ee eheed 14:32.